Raaxo Shan Kursi Oo Lagu Iibinayo Warshadda Musqusha Musqulaha - ZNZK
Musqulaha musqulaha vs cufka guud Musqulaha musqusha
Qayb kastaa waxay u adeegtaa 300 booqasho maalin kasta, 4 nooc oo musqulo faaruq ah suulkiiba, 6 musqulood.
Xalka Biyo / biyo raac Wadarta isticmaalka biyaha sanadlaha ah
Cuf isjiidadka guud ee musqulaha lagu maydho 5L 13140Ton
Musqulaha musqulaha 0.4L 1051Ton
Waxaad keydisaa 12089 tan oo biyo ah sanadkiiba.
Si fudud u rakib
Waxay u kala duwan yihiin musqulaha dhaqameed ee ku tiirsan culeyskooda sida isha korantada, musqulaha faaruqintu waxay isticmaalaan cadaadis taban si ay u noqdaan ilo koronto. Nidaamka rakibidda dhuumaha ayaa raaci kara qaab-dhismeedka bannaanka, qadka toosan, qaloocsan, iyo xitaa jihooyinka kor iyo hoos. Runtii waa la rumeeysan yahay in "biyuhu kor ugu sii socdaan"
Musqusha marka la barbardhigo hababka bullaacadaha culeyska oo kala duwan, musqusha faakuumku waxay isticmaashaa ilo cadaadis xun oo ah -0.035MPA ilaa -0.055mpa si loo hubiyo inay jirto awood ku filan oo lagu qaadi karo biyaha ceyriinka ah, waxaana lagu qalabeeyaa farsamo wax lagu burburiyo si loo yareeyo xannibaadda wasakheynta dhuumaha waa qadar yar, sidaa darteed ma fududa in la fariisiyo.
Nadaafad badan oo nadiif ah
Dhuumaha ayaa ku jira xaalad faaruq ah oo xiran, sidaa darteed urta ma faafin karto, mana jiri doonaan gaasas waxyeello leh iyo jeermis ku jiri doona tuubooyinka.
Lcuncun isticmaalka biyaha ee musqulaha faaruqa ah waxay si toos ah u yareeyaan dheecaanka biyaha madow, waxay yareeyaan culeyska daaweynta madow ee dowladda hoose, waxayna xallisaa dhibaatada biyaha madow ee sida tooska ah looga soo saaro biyaha dabiiciga ah ee bulshada casriga ah waxayna wasakheysaa dhibaatada ilaha biyaha; Musqulaha faakuumku waxay ururiyaan bullaacadahaconcenwasakhaysan, oo lagu daray wasakhda la ururiyey oo leh uruurin badan oo walxo ah, taas oo ka dhigi karta bacriminta dabiiciga ah ee loo isticmaalo beeraha dabiiciga ah. Tani runti waxay qashinka u rogi kartaa khasnad waxayna gaari kartaa eber qiiqa. Waxay xallinaysaa dhibaatada dib-u-warshadaynta walxaha ee deegaanka, sidoo kale dib-u-warshadaynta beeraha.
Room Qolka maamulka waxaa lagu qalabeeyaa sanduuq guud oo wax lagu qeybiyo, koronto shid, godka, daaqada iftiinka maalinta, saldhig fuuq furan oo isku dhafan (oo loogu talagalay daaweynta qafiska daweynta), haanta biyaha nadiifka ah iyo sanduuqa wasakhda, kaas oo buuxin kara baahida 2000 ilaa 3000 qof. deegaan aan biyo soo gelin iyo bulaacada toona. Macaamiisha ayaa dooran kara kuleylka iyo kuleylka eray bixinta, iyo heerkulka hareeraha waa -50 ° ilaa 40 °.
Hore: Musqusha ugu Fiican Musqusha Bacriminta Biyo La'aanta - Musqusha Vacuum - Porcelain - Zhongneng
Xiga: Musqusha Musqusha Musqulaha Biyo-badbaadinta ee Caalamiga ah Dhacdo ahaan
Musqusha la Dhaqaajin karo
Musqusha biyo ku filan
Musqusha Biyo Ka Yar
Musqusha Biyaha Lagu Kaydinayo